Grimme UK Ka Mark 10 Ọdịdị Na Driffield Show Site n'itinye Ihe Chakwasa Ike na Harvesteye & Haith-otu - Potatoes News
Ndị bịara na Driffield Show nke afọ a ga-abụ ndị mbụ ga-ahụ nkwalite ndị kachasị ọhụrụ na sistemụ mgbanwe nke gbakọtara na ịha nha nduku na ebe owuwe ihe ubi ma ọ bụ mgbe ị na-atụnye poteto n'ime ụlọ ahịa.
Driffield Gosi 2019
GRIMME UK ga-aga mmemme izizi ya n’ime otu afọ ma gosipụta ụdị nke kachasị ọhụrụ nke HarvestEye TM, teknụzụ patenti mepụtara na njikọta B-Hive Innovations.
Amalitere na British Potato na 2019, HarvestEye na-eji igwefoto 3D na mmụta igwe iji gụọ, tụọ ma nyochaa ọdịiche dị na ihe ọkụkụ mgbe egbute ha.
A ga-ewebata ndị ọbịa bịara na ntọala GRIMME UK (# 180) na igwefoto 3D ọhụrụ nke etinyegoro na usoro emelitere kachasị ọhụrụ, na-enye ọbụna izi ezi ka ukwuu. HarvestEye emewokwa ngwaike na wiwi emela emezi na sistemụ, nke enwere ike weghachite ngwa ngwa iji wepụta sistemụ ihe ubi ka ndị na-eto eto nwee ọhụhụ zuru oke etu etu esi ewepụta ihe ọkụkụ dị iche na mpaghara ha niile.
"HarvestEye na-enye ndị ọrụ ohere imeziwanye arụmọrụ ihe ubi na nlọghachi ubi," ka Ed Hodson, Ọkachamara Ngwaahịa Nduku na GRIMME UK na-ekwu. “Teknụzụ ahụ kwụ ọtọ iji wụnye ma nyere ndị ọrụ aka ịhazi azụmahịa ha nke ọma, kpochapụ ihe mkpofu na ngwongwo ọkọnọ ma bulie nlọghachi ihe ubi. Anyị na-atụ anya n'ezie ịnabata ndị mmadụ na nguzo anyị ma gosi ha nkwalite ndị na-adịbeghị anya nke HarvestEye tinyegoro n'elu ikpo okwu.
Ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke na-ahụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ka a na-egbute ha; nha nha, ịgụ na mgbanwe.
Owuwe Ihe Uwa ™ bu ihe omuma nke ndi UK nke n’enye otutu ihe, onu ogugu na ihe ndi akuku na poteto asacha dika esi egbute ha. Ihe nyocha data agwakọtara na-egosi kpọmkwem ihe a na-ebuli elu na ebe ọ nọ n'ọhịa. Inye ihe omuma banyere uzo karia ihe nlebara anya: ihe omuma a ga - enyere aka ime ka onu ahia di elu ma belata nha nha. maka owuwe ihe ubi gị.
Key Atụmatụ -
Ngwakọta teknụzụ igwefoto ejiri kọmpụta kọmpụta dị elu
Enwere ike iweghachi ya na sistemụ ubi dị
Ozi dị ndụ n'oge owuwe ihe ubi ka a na-ewepụ ihe ubi n'ubi
Enweghị ihe achọrọ maka usoro ndị ọzọ ntụgharị
Technologybido teknụzụ maka mmepe n'ọdịnihu na-atọ ụtọ
Dika ahia ahia HarvestEye ™ gha emeputa ma kwado ya site na ndi oru HarvestEye Ltd. Otu mmekorita nmekorita ya na enyere GRIMME aka ibu onye nkesa UK maka HarvestEye ™ maka ndi ohuru na ndi oru ugbo na ndi oru ugbo.
Nakwa mgbakwunye ọhụrụ na HarvestEye, GRIMME UK ga-enwe ọtụtụ igwe ndị ọzọ na-eduga klaasị na ngosi, gụnyere Varitron 220, GB230 bel potato planter, GH2 ahiri abụọ na-agba ịnyịnya Hiller, ọtụtụ igwe ogbugba mmiri na ihe ọhụrụ Stanhay X Series drill. .
N'ihi ọrịa na-efe efe, Driffield Show nke afọ a ga-abụkwa oge mbụ GRIMME UK na-egosipụta n'akụkụ Haith Group. Ulo oru abuo a batara na nmekorita nke onwa n’onwa Eprel 2020 iji nye azịza zuru oke site na iku ihe ubi rue owuwe ihe ubi, ichicha, ichi ihe na idozi ya. GRIMME UK ga-egosipụta ọtụtụ ihe ọhụụ ọhụrụ nke Haith na ntọala ya.
“Anyị mere ngosi izizi anyị na Driffield Show na 2010, ebe ọ bụ na kagbuo ihe ngosi nke afọ gara aga, nke a ga-abụ oge nke iri anyị gosipụtara. Anyị maara na ihe ngosi nke afọ a ga-adị iche na nke ndị gara aga, mana anyị nwere obi anụrị maka ịlaghachi na ndị mmadụ ihu na ihu, na-agwa ha okwu banyere ugbo ha ma gosi ha ihe mgbakwunye ọhụrụ na mpaghara anyị, ”ka Tom Goose, GRIMME na-agbakwụnye. Onye ahia UK.
Driffield Show na-ewere ọnọdụ na Driffield Showground na 21st na 22nd July.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara GRIMME UK, njikọ ya na Haith na HarvestEye, gaa na https://www.grimme.com/uk
Grimme UK iji gosi akara ngosi iri na ngosi nke driffield site na itinye ihe ngosi na otu Harvesteye na otu Haith
Tags: Ihe ngosi Driffieldjọrọ njọOwuwe Ihe Uwa ™usoro ogbugba mmiri n'ubismart ugbo
Osisi nduku Washington kpo oku
AUSVEG kwupụtara Michael Coote dị ka onye isi ọhụụ